Nleta anya ihe omimi: SEO Pour Le Marqueur Europian N'est Pas Tout Sur Les Langues
SEO bụ a strategy costable nke na-enyere ndị ahịa aka inwe aka boosted na ha ọrụ. Ndị ọkachamara nke ahịa digital nwere nsogbu na-eme ka ndị Européens na SEO. Nsogbu bụ ịchọta asụsụ a. Gaa na-eme ka gị na saịtị weebụ Europe na-enyere ndị ahịa Europe, ị kwesịrị target na ndị ọzọ nsogbu na la asụsụ.
Oliver King, onye nduzi nke onye ahịa nke Ọkachamara , kọwapụta akụkụ ndị ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-azụ ahịa gị na Europe.
Kwuru na ndị States d'Europe gụnyere pasent 50 - is windows xp becoming obsolete. Gbalịsie ike ịmepụta ihe dị iche iche nke asụsụ maka inwe otu campaign SEO efficient ị na-eme ka ọ dị n'etiti. Obodo Union nwere 23 asụsụ, bụ ndị a na-aha maka ịbụ ndị a na-eji dị ka ọrụ asụsụ site na Union. Dị ka ihe atụ, ị ghaghị ịghọta na Europe bụ mba na-agụnye ọtụtụ asụsụ.
Ezi ihe nlere bụ nke Netherlands, mba nke nwere nde mmadụ 17 nde mmadụ. Ndị Netherlands jiri asụsụ abụọ, ndị uwe ojii na ndị Netherlands. Ọ bụrụ na ị na-adị ndụ n'ime SEO, ị ga-enwerịrị oge ị ga-enwerịrị oge. Ị ga-enwe ike ịmepụta gị Web saịtị na asụsụ ọ bụla dịnụ iji nweta gị targets na lement..Ị gaghị echefu asụsụ niile dị na Europe ka ị na-enwe ọganihu. Nweta ọdịnaya ọ bụla dị mma na mbụ maka ndị ahịa gị nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche na gị na ndị ọzọ na ị ga-ebutere ha ozugbo.
Passons à la chose réelle. N'èzí asụsụ, ịkwesịrị ịtụle ịkwalite ọdịdị nke ọdịbendị gị. N'okwu nke ọdịbendị, ị ghaghị ịtụle ihe dị iche iche na-adakwasị na ndị mmadụ na-eche ma na-adị ndụ. Ndị ahịa ndị Europe nwere ụdị ndụ dị iche. The same chose applies when it comes to how they act on the Web site et les plateformes de médias social. Nde mmadụ asaa nde mmadụ bi na Netherlands nwere ike ịbụ ndị na-arụ ọrụ na ntanetị n'otu oge ma chọpụta ihe dị iche iche dị iche iche na nke dị iche iche. Ndị ahịa gị bụ ndị na-enweghị atụ ma na-enwe ụzọ dị iche iche isi mee ihe. Cheta nke a mgbe ị na-achọpụta ihuenyo weebụ gị.
Ọ bụla mba Europe nwere ọdịbendị omenala. Omenala na asụsụ bụ akụkụ abụọ dị iche iche nke ị ga-atụle mgbe ị na-achọpụta ihe ị na-eme. Ị nwere ike na-ele ndị na-nwere ndị na-echebara ma na-eme ka ndị mmadụ na saịtị weebụ. Ụfọdụ mba na-eji asụsụ ha nwere ike ịbụ asụsụ, but they still have a different way of doing things.
Nke a bụ ndepụta nke ndụmọdụ nke ị na-enyere gị aka na-eme ka ọha na eze na-arụ ọrụ nke ọma:
Ghọta akụkọ nke mgbasa ozi ọha gị
Mee nchọpụta nke ọma banyere la différence entre les langues impliqués
Nọgide na-arụ ọrụ na-agụnye onye na-agụ ihe na-eweta ọdịnaya
Na-aghọta ihe gị ọha target target na-enweghị ike ịbụ na-echebara echiche banyere ahịa ahịa. Inweta ihe positive maka gị campagne de référencement dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ị na-elebara ndị Européens anya na ha na-aiment na plus, eche na-etinye oge na ha na-arụ ọrụ na a nwa ederede natif. Europe bụ unnorme ahịa. I kwesiri ibia.